Dɛn na Bible Ka Fa Akodie Ho?
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Batak (Toba) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Mam Maya Mazatec (Huautla) Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Wobɛyi saa asɛmmisa no ano sɛn? Nnipa pii susu sɛ Onyankopɔn pene akodie so. Nea enti a wɔka saa ne sɛ, tete no Onyankopɔn hyɛɛ sɛ n’asomfo binom nkɔ ako, na Bible foa asɛm yi so. Ebinom nso ka sɛ Yesu, Onyankopɔn Ba no kyerɛkyerɛɛ n’akyidifo sɛ wɔnnɔ wɔn atamfo. (Mateo 5:43, 44) Enti wɔsusu sɛ na Onyankopɔn pene akodie so, na seesei deɛ ɔmpene so.
Wodwene ho sɛn? Onyankopɔn pene akodie so anaa? Sɛ wogye di sɛ ɔpene so a, ɛnneɛ sɛ aman mmienu de si ani a, hwan akyi na Onyankopɔn bɛgyina? Nsɛmmisa yi ho mmuaeɛ bɛboa wo ama woahu sɛ ebia adwene a wowɔ wɔ ɔko ho no yɛ papa anaasɛ ɛnyɛ papa. Yɛmfa no sɛ aman mmienu reko, na wo deɛ wogye di sɛ Onyankopɔn pene akodie so, na ɔman a wotaa akyi no, ɛno ara nso na Onyankopɔn bɔ no kyidɔm. Wohu no saa a, ɛbɛma w’ani agye na wobɛnya ahotosoɔ sɛ nkonimdie bɛyɛ mo dea ke. Nanso, fa no sɛ atamfo no mmom na Onyankopɔn gyina wɔn akyi, anka wobɛte nka sɛn? Ebia wobɛsan asusu asɛm no ho bio.
Nanso biribi wɔ hɔ a ɛho hia paa. Ɛne sɛ, sɛ wohu Onyankopɔn adwene wɔ akodie ho a, ɛbɛtumi ama woahu sɛnea ɔte. Akodie ama nnipa ɔpepem pii adi amia. Sɛ biribi a ɛte saa ato wo pɛn a, ɛnneɛ ɛhia sɛ wote asɛm a ɛdi so yi ase: Ebinom te nka sɛ akokoakoko ne ɛho amanehunu yɛ Onyankopɔn fɛ, na sɛ obi rehu amane a, ɛho asɛm nha no koraa. Wogye di sɛ saa na Onyankopɔn te?
Sɛ wohu nea Bible ka wɔ asɛm yi ho a, wo ho bɛdwiri wo paa; wobɛhu sɛ ɛsono Bible adwene koraa. Ɛfiri teteete nyinaa, Onyankopɔn adwene wɔ akodie ho nsesae. Sɛn na na Onyankopɔn bu akodie, na bere a Yesu baa asase so no nso ɛ? Momma yɛnhwɛ nea Bible ka. Ɛno bɛboa yɛn ma yɛahu Onyankopɔn adwene wɔ akokoakoko ho nnɛ. Afei nso, sɛ akodie bɛfiri hɔ oo, sɛ ɛremfiri hɔ oo, ɛno nso yɛbɛhu.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN November 2015 | Onyankopɔn Bu Akodie Sɛn?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN November 2015 | Onyankopɔn Bu Akodie Sɛn?